बैंकहरु पुरै डिजिटल कारोबारको खोजिमा, कर्मचारी कटौती भावि रणनीति – RemitKhabar
बैंकहरु पूर्णतया डिजिटल कारोबारको खोजिमा जुटेका छन् । खाता खोल्ने, स्टेटमेन्ट परिक्षण गर्ने, रकम जम्मा गर्ने, डकुमेन्टेशन तयार गर्नेदेखि लोन एप्रुवल सम्मका कामहरु डिजिटलाइजेशन गर्ने तयारी भइरहेको छ । रकमान्तरको काम, जुनसुकै बैंकको जुनसुकै शाखाबाट जुनसुकै बैंकमा जम्मा गर्न सकिनेगरी चेक क्ल्यिरीङ, कार्यालयको तलब भुक्तानी, फन्ड ट्रान्सफर, हस्ताक्षरको भेरीफाइ, सबै कामहरु कम्प्युटर र अनलाइनकै माध्यमबाट गर्न सकिन्छ । यसका साथै मोवाइलबाटै रकमान्तरण गर्न सकिने तथा एउटा मोवाइलबाट अर्को मोवाइलमा रकम ट्रान्सफर गर्न सकिने अबस्था भएपछि बैंकसम्म धाउन पनि नपर्ने अबस्था छ । यो कार्यलाई अहिलेको युवापुस्ताले मात्रै अनुशरण गर्दा पनि बैंकहरुले आधि कर्मचारी कटौटी गर्न सक्ने देखिन्छ । हाल्े नविल बैंकले घरबाटै खाता खोल्न अभिप्रेरित गर्दै स्कीम नै सार्वजनिक गरेको छ । अधिकाँस बैंकहरुले घरबाटै खाता खोल्न सक्ने बनाएका छन् । कोरोना संक्रमण र लकडाउनले यो कुरालाई थप प्रमाणित गरिदिएको छ । डिजिटल कारोबार धेरै हुृँदा कर्मचारी कम भए पुग्छ । डिजिटल कारोबार बढाउँदा बैंकहरुको प्रशाशनिक तथा कर्मचारी खर्चमा भएको लगानी कम गर्न सकिन्छ । डिजिटलाइजेशनले धेरै कर्मचारी कटौटी गर्न सकिन्छ । यसलाई बैंकहरुले भावि रणनीतिका रुपमा लिएका छन् ।
लकडाउनपछि डिजिटल निशुल्क के हुन्छ ?
आगामी असार १ गतेबाट आंशिक रुपमै भएपनि लकडाउन खुल्ने प्राय निश्चित छ । हालै सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममार्फत पनि डिजिटल कारोबारलाई फोकस गरेको छ । केही बैंकहरुले बैंकलाई पूर्ण डिजिटलाइजेशन गर्ने घोषणा समेत गर्न थालेका छन् । हाल बैंकिङ कारोबारमा डिजिटल सेवा निशुल्क छ । यही अबस्थामा बैंकहरुले अब तत्काल डिजिटल कारोबारमा शुल्क लिन सक्लान कि नसक्लान् । राष्ट्र बैंकले डिजिटल शुल्क बारे के आगामी मैद्रिक नीतिमै सम्बोधन गर्ला ? बैंकहरुले डिजिटल कारोबार निशुल्क गरेपछि अब बैंकहरु नगद कारोबारमा शुल्क लिने तयारीका थिए । कोरोनाको संत्रास बढ्दै गएपछि करिव ५० प्रतिशतले नोटको कारोबार घटेको बैंकहरुले बताएका छन् । नगद कारोबार धेरै हुने बैंकहरुमा नगद कारोबार ह्वात्तै घटेको छ । डिजिटल कारोबार अत्याधिक धेरै भएका कारण नगद कारोबार घटेको भने पक्कै होइन । आर्थिक चलायमान नहुँदा बैंकिङ कारोबार नै घटेको हो । तथापी अन्य समयमा भन्दा डिजिटल कारोबार अहिले बढेको छ । लकडाउनका कारण डिजिटल कारोबार बृद्धि भएको छ । नोटबाट कारोबार गर्दा कोरोना संक्रमण हुन सक्ने भन्दै नोटको कारोबार कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति पनि यही थियो । तर अब भने कोरोनाको विषयलाई लिएर बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकलाई कोरोना कर लिने व्यबस्था मिलाउन माग गरेका छन् । नगद बैंकिङ कारोबारलाई कम गर्न कोरोना कर लगाउने र क्यासलेस बैंकिङलाई महत्व दिने उद्येश्यले नगद कारोबारमा ‘कोरोना कर’ लिन खोजिएको एक बैंकरले बताए । तर अबस्था त्यस्तो सहज छैन कि कोरोना कर कहिलेसम्म भन्ने अर्को प्रस्न छ । यसलाई हेर्दा बैंकहरुले कोरोना करको नाम दिएर अब नगद कारोबारमा कर लिन खोजेको देखिन्छ ।
नोटको कारोबार गरेबापत लिइने दस्तुरलाई बैंकहरुले कोरोना कर को नाम दिएका छन् । कोरोनाको संक्रमण फैलीएको र डिजिटल कारोबारलाई निशुल्क गरिएको हुँदा अब बैंकबाट पैसा निकाल्दा होस या आफूसँग भएको रकम जम्मा गर्दा कर लिने देखिन्छ । नगद रकमबाट कोरोना सर्ने सम्भावना भएका कारण यसो गरीन लागेको बैंकहरुको भनाई छ । तर ‘कोरोना कर’ नाम दिइएको यो कर सम्पूर्ण नगद कारोबारमा लगाउने या बैंकिङ कारोबारमा मात्रै लगाउने अन्यौलता छ । कोरोना कर कति लिने भन्ने बारे निर्धारण भएको भने छैन । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्णय गरीसकेको छैन । यो कर बैंकमा मात्रै लगाउने वा नगद कारोबारमा लगाउने भन्ने अन्यौलता छ । बैंकर्स संघले नोटको कारोबार र यसको प्रयोगबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम हुने उल्लेख गरेको छ । हालै सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममार्फत पनि डिजिटल कारोबारलाई फोकस गरेको छ । केही बैंकहरुले बैंकलाई पूर्ण डिजिटलाइजेशन गर्ने घोषणा समेत गर्न थालेका छन् ।
असार १७ बाट आन्तरिक उडान गर्ने – प्राधिकरण र एयरलाइन्स कम्पनीको समहति